Suuqa – Page 3 – Garsoore Sports
Kooxda Turkiga ka dhisan ee Fenerbahce ayaa talaabo layaab leh u qaadeysa si ay u bixiso mushaharka xiddiga kooxdeeda ku biiray(aan la shaacin) ee Mesut Ozil. Mesut Ozil ayaa haatan ku sugan...
Weeraryahankii hore ee kooxda Arsenal Alan Smith ayaa tababare Arteta uga digay inuu ka fiirsado saxiixa ay ku dhowdahay ee Martin Odegaard, isagoo carabka ku adkeeyay inuu fashil u noqon karo sidii...
Maalin wanaagsan aqriste, Maadaama uu furanyahay suuqa kala iibsiga cayaartooyda ee bisha Janaayo kooxu waxay ku kala hormarayaan saxiixyada bartilmaameedyadooda, iyadoo koox weliba ay dooneyso inay boosas gaar ah iska xoojiso isla...
Kooxda Arsenal ayaa qarka usaaran iney lasoo saxiixato khadka dhexe ee kooxda Real Madrid iyo xulka Normay Martin Odegaard, iyadoo la filayo in waqti aan fogeyn ay saxiixiisa ku dhammeeyaan. Sida ay...
Asc maalin wanaagsan saaxiibbayaal. Waxaa socda ka dukaameysiga suuqa kala iibsiga cayaartooyda ee bishan Janaayo maadaama 10 cisho ay ka hartay, kooxaha ayaa ku kala hormaraya saxiixyada cayaartooyda. Haddaba waxaan idiinsoo gudbineynaa...
Kooxda Manchester United ayaa la soo warrinayaa inay si weyn u dooneeyso saxiixa daafaca dhexe ee kooxda Lens Facundo Medina taasoo sabab u ah bandhiga cajiibka ah ee uu 21 jirkan ka...
Cayaaryahanka kooxda kubbada-cagta ee Arsenal Mesut Ozil ayaa maraya heerarkii ugu dambeeyay ee ka tegitaankiisa kooxda, waxaana uu isu diyaarinayaa billaabashada rasmiga ah ee safarkiisa xiga. Dhowaan ayay ahayd markii ay si...